Store Manager | Mandalay Golden Wing Co., Ltd. ﻿
•	Construction Field နှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Construction ပစ္စည်းများအားနားလည်သိရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Management ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Team Work ဖြင့်ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	မိမိလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ်တာဝန်ခံမှု၊တာဝန်ယူမှုရှိအောင် ဦးဆောင်ပြသနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Store အတွင်းလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို အကောင်းဆုံးနှင့် အဆင်ပြေမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Experience at least5years in field.
•	Age between (35-50)years old.
Store Manager Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Mandalay Golden Wing Co., Ltd. Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Accounting/Audit/Tax Services Jobs in Myanmar, jobs in Yangon